Apple amaliteghachiri echiche nke egwu ụlọ na HomePod | Esi m mac
Apple eweghachiri echiche nke egwu ụlọ na HomePod
Apple laghachiri na ụwa nke ndị ọkà okwu na HomePod, onye nọchiri na akụkọ ifo iPod Hi-Fi, ọkà okwu nke na-abịa na-ebu akụkọ na nke ahụ metụtara Apple Egwu na Apple ngwaọrụ ebube. Ọ bụ ọkà okwu nwere ike ịmịpụta oghere dị iche iche site na ịchịkwa ntụpụ nke nsị nke ebili mmiri, na nkenke, ọganiihu ọhụrụ nye Apple.
Banyere imewe ya, anyị nwere na ọ dị ka nke Mac Pro mana ntupu gbara ya gburugburu. A ga-ere ya na agba abụọ, oji na ọcha na n’elu ya nwere akụkụ ntụgharị ị pụrụ ịhụ ihe oyiyi nke Siri nnyemaaka akara ngosi na-efegharị.
Ọkà okwu ọhụrụ a enweghị ihe ọ bụla na ihe na-erughị asaa na-ekwupụta tweets na nnukwu subwoofer na-achịkwa ihe a niile site na mgbawa A8 nke na-eme ka njikwa nke ebili mmiri na-eme ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche na nke ya.
O nwere igwe okwu isii gbara ya gburugburu ịkpọ Siri, yabụ ịchị ya site na enyemaka onye ahịa ahụ bụ ngụkọta. Ugbu a ị nwere ike ịtụnye ọtụtụ njikọ ndị ọzọ na Siri na HomePod na nke ahụ bụ kpọmkwem ihe na-eme ya pụrụ iche. Enwere ike iji HomePod dịka onye enyemaka ụlọ ọ ga-enwe ike ịgwa gị akụkọ, otu okporo ụzọ dị, mkpu, ozi, wdg. Ma oburu na inwee HomeKit, HomePod gha achịkwa ngwaọrụ ndia.
Ya ire price ga-349 dollarss ma gaa ire ere na December na United States, United Kingdom na Australia. Spain na-anọ maka nnyefe mba nke abụọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Apple eweghachiri echiche nke egwu ụlọ na HomePod
Cesar Vilchez dijo
Ọfọn, dị ka ọ dị ka "mma" dị ka ipod HiFi, ha ga-aga nke ọma kama ntakịrị!
Zaghachi César Vílchez
Ezigbo mma Post ... dị ka ndị niile ị na-ebipụta ... Ekele ....
Apple weputara ọkwa abụọ nke iPad Pro ọhụrụ